Ukunyanga kwama-Spa, ukuhlalisa ezimbini
Umtshato uyisiganeko esinomdla kunye nesigxina. Izivakashi ziyamenywa, ikhekhe iyalelwe, isambatho esine-ironed ixhomeke kwihanger. Uqinisekile ukuba awuzange ukhohlwe nayiphi na into? Ngobusuku bosuku olubalulekileyo, musa ukulibala ukuzinyamekela. Yiya kwi-salon enobuhle uze ube ngukumkanikazi! Nangona kunjalo, okhethiweyo wakho akayi kuyeka ukuzibeka. Singaxelela ukuba iinkqubo ze-SPA, ukuxilisa ezimbini kunye nezinye izinto ezihle ze-cosmetology ziya kuhlawula imizimba yakho ngempilo namandla. I-SPA salons ziye zavelisa iinkqubo ezininzi ezincedo kubamantombazana namadoda.
Iinkqubo ze- SPA zomtshakazi.
Kwiininzi zee-salon ze-SPA unokuhlangabezana neenkqubo ezikhethekileyo zenkqubo "Kuye" kunye "Nokuba kuye". I-Aromatherapy kunye ne-hydromassage yomtshakazi iya kufuneka ifike ngokufanelekileyo: akayi kugcina kuphela ukuhlalisa emtshatweni womtshato, kodwa nayo iya kunika umzimba umpeko wamatshingo. Iinkqubo ze-SPA eziyinkimbinkimbi, ngokukodwa, ikhosi ye-thalassotherapy yesi-6 ukuya kwe-10 iyomeleza umzimba kwaye iqinisekisa isiqingatha sonyaka senhlalakahle. Ngenxa yokuba iinkqubo ze-SPA zinciphisa ukukhulelwa, ukunyamezela, uxinzelelo kunye nobunzima obukhulu.
Inkqubo ye-SPA "Ubuhle bamantombazana". Ngelinye ilanga uza kuba neenkqubo ezininzi.
- Ukugubha ngodaka olutyebile nge-aloe vera.
- Massage yaseSweden yesiqingatha seyure kunye neoli ekhethekileyo.
- Umthombo wase-Amorosa, oku kuhlamba okufudumele kunye nosawoti obuncibilikileyo kunye neoli efunekayo. Injongo ephambili yale nkqubo ye-SPA ihlaziya kunye nokuphumula.
Inkqubo ye-SPA "Bath of Cleopatra". Eyaziwayo kusukela kumaxesha amandulo, inkqubo yobutsha obungunaphakade lwabasetyhini iya kunikwa kwiindawo ezininzi ze-SPA. Izindwangu ezikhethekileyo zixutywe ngomxube wamafutha abalulekileyo, ioli yeoli kunye nobisi, apho umfazi ehlanganiswe khona. Emva koko ibhaptizwe kwindawo yokuhlambela emfutshane imizuzu engama-30 ngokushisa kwama-37-38 degrees. Ngenxa yempembelelo enenzuzo yalo mgaqo, iipolisi emzimbeni ovulekile. Izondlo zingene ngaphakathi kancinci, zinika ukunyusa nokunyusa.
Umlambo we-lymphatic. Inqubo ekhethekileyo ye-SPA, emva koko ungakwazi ukuhamba ngokusesikhundleni elunxwemeni kwi-bikini. Kwakhona kunceda ukuphucula izihlunu, ukwandisa ukunyaniseka kwesikhumba kunye nokuphucula umbala. I-drainage ye-lymphatic enye yeendlela eziphambili zokulungiswa kwamanani kunye nokwelashwa kwe-cellulite, ngenxa yokusebenza kwe-metabolism kwiiseli ezinamafutha.
Iinkqubo ze- SPA zomyeni.
Amadoda ngaphambi komtshato aguqulwa. Banobuqili ngakumbi phambi kwamehlo ethu. Oku kuphinda kuvuselelwe kukhuthazwa ngokuphumla okusebenzayo kunye nokuzilolonga ngokomzimba kwindawo yokuzivocavoca (kwaye kungekhona kuphela). Iinkqubo ze-SPA ziya kubeka inkqubo yeentlanzi zesigxina esisinyanisekileyo somntu, ukukhulula ekusebenzeni ngokugqithiseleyo. Impilo enhle kubo, njengoko ifunekayo ebomini bentsapho!
Inkqubo ye-SPA "UMgaqo-siseko we-Amathus". Le nkqubo ye-SPA yobungqina kunye nempilo entle yenzelwe iintsuku ezintathu. Olu bunzima lweenkqubo ze-SPA lubandakanya:
- I-mask yomdaka ebusweni.
- Ukugubungela ngodaka lwamanzi.
- Umzimba we-crystal-peeling body with salt salt and oil oil.
- Imaski yentloko kunye ne-scalp edakeni, iyenziwa ngamafutha anamnandi.
- Ukusikwa kweenyawo.
Siyabulela kuzo zonke ezi nkqubo, ukujikeleza kwegazi kuphucula, kunye neengqungquthela zesikhumba ezifayo zisuswe. Kwaye ukugqiba kokugqibela kweenyawo kunye nomdaka wamaminerali kuza kuzisa nokuzonwabisa okungenakuqhathaniswa.
Iinkqubo ze- SPA ezimbini.
Ukwenza i-honeymoon ibe yothando ngakumbi, kwaye inqanawa yentsapho ayizange iphule ubomi bemihla ngemihla, inwabele i-SPA-inkqubo kwaye yenza i-massage ezimbini. Emva kwakho konke, ukuzonwabisa kunye kunye nokuthanda. Kwiindawo zamanje ze-thalassotherapy unakho ukunikezelwa ngethuba lokuqala lokuxhamla umphefumlo nomzimba.
Umhlambi weMadyu .
Khawucinge nje, kwindawo ekhethekileyo yesikhumbi esandula kutshata, ihlanganiswe ngeentlobo ezintathu zodaka (ngemilenze, umzimba kunye nobuso). Ndiyabulela ukukhanya okusondeleyo, umoya ophezulu kwigumbi unomthelela ekuphumuleni okungenamkhawulo. Kule mizuzu emihle uwedwa kunye nawe, kodwa ukuphefumlelwa komntu oyintanda othandekayo kukumisa ngendlela yothando. Le nkqubo iquka ukuphunga ioli, enokubaluleka kakhulu.
Ukuhlawula i- Ayurveda. Ekuguquleleni, igama elithi "Ayurveda" lithetha "ubulumko bomi". Nangona le ndlela yokuhlambalaza yayivela eIndiya yakudala, sinokuyithandwa kakhulu. Inkqubo iqalisa kuba oko kuthiwa "iso lesithathu" lomntu uphantsi kwelinye iphuzu, isenzo esifanayo se-oyile yeoli. Le nkqubo ihlenga ingqondo yeengcamango ezingaphandle. Emva koko ioli efudumele isetyenziswe kuwo wonke umzimba ngomzimba we-massage. Kwaye nganye inxalenye yomzimba - uhlobo lwaloooli.
Ngaphambi kokutshata komtshato, into ephambili ayikulibala wena. Isipho esihle kunazo zonke umtshakazi nomyeni abakwazi ukuzinikela zona, uthando, ukuhlonelana kunye nokunyamekela komnye nomnye. Vumela le mvakalelo ekuqaleni kwentshukumo yokuphila yempilo ibanjwe yienkqubo zeParadesi ze-SPA. Kukulungele ukusebenzisa kwi-SPA-salon iintsuku ezintlanu ngaphambi komtshato. Ukuhamba kuzo zonke iinkqubo ezikhethiweyo zezonyango, ngeli xesha kuya kuba ngokwaneleyo. Kwaye uqale ngcono xa ubhabha! Ukususela kumaxesha amandulo, kwakuyinto yesiko ukuba abafazi abatshatileyo bodini lomtshato kufuneka baveze iqabane labo elizayo kwindawo yokuhlambela. Kwaye emva komtshato, ngosuku lwesibini, umtshakazi nomyeni bathunyelwa kwigumbi le-steam. Ukungcola okuhlangeneyo kwakukubonelela ngeenzala ezininzi kunye nobomi obonwabileyo.
Iinkqubo eziqhelekileyo ze- SPA .
Ngexesha lokutshintshwa kwamakhonkco, izandla zomtshakazi ziya kuba zikhangeleke, ngoko kufuneka zikhangeleke zihlonipheke kwisiqwenga. Ukuba izipikili zakho zinomfanekiso omhle, kodwa ubude bawo bufutshane, uye kwi-salon kusengaphambili kwaye uzincede ngeengubo zengubo. Ngokomzekelo, isilikhi, i-fajder okanye i-gel yengubo. Kwiiveki ezimbini, izipikili ziya kuba zide ngokwaneleyo ukuba zihlotswe kakuhle. Ukuba umzo wezipikili awugqibekanga okanye zikhukhumezekile, yenza ukwakha okwakhiwa. Ukulinganiswa kwezipikili kulungelelwe ngeveki kunye nesiqingatha ngaphambi komtshato, kuba kuyimfuneko ukusetyenziswa kwiisilumko zokufakelwa. Eyona ndlela ingcono, xa ubude bezipikili buyingxenye yesithathu yobude beempiki zendalo.
Ukongeza kwiinkqubo ze-SPA zokuthengisa, kukho iindibano zentando yesininzi. Baya kwenza nayiphi na i-SPA-salon kwanoma yimuphi umzi omkhulu ngokwaneleyo. Ndikholelwe, ukubukeka okuphumayo kunye nobuso obusisigxina kuya kwenza ukuba umkhwa ugqitywe kunye nazo zonke iindwendwe! Khetha kwiinkqubo ze-salon SPA, kuquka namanzi amanyathelo . Ngokomzekelo, unyango lwewayini, ukuhlamba kunye ne-champagne, hammam yaseTurkey okanye ibhotile yaseJapan. Kuvakala ukungaqhelekanga, kodwa kubonakala kusebenza kakuhle. Uninzi lwamafutha anamakha nalo lunempembelelo yokwelapha. Bayavuya baze bahlaziye. Uyakuthanda ama-frangipani, i-jasmine, i-patchouli, i-ylang-ylang. Okanye iinkqubo kunye nolwandle ityuwa.
Amathoni amancinci athathele isikhumba esilukileyo . Ama-cosmetologists abanolwazi kwi-salon aya kukubangela ukuba zeziphi iintlobo zokuzihlamba umzimba wakho ezifuna - ukubuyisela amanzi, i-lymphatic drainage okanye i-reflex.
Umlinganiselo osebenzayo kakhulu kwi-cellulite echazwe yi- algal wraps . Ixesha eliqhelekileyo lisetyenziswe kule nkqubo i-brown algae. Umzekelo, i-kelp kunye nefucus. Ziyimpumelelo ngokukhethekileyo ekuqhekezeni amafutha amaninzi.
Ukuba inkqubo yakho ibandakanya isambatho kunye namahlombe avulekileyo, ummandla we-decollete udinga ingqalelo ekhethekileyo! Ulusu kule ndawo lomelele kakhulu, ngoko ukunyamekela kwalo kuya kuba ngolu hlobo lulandelayo: ukhilimu onomsoco kunye nophepha olunomdla . Ikhumba elikhuni kunye nelofileyo liyakususwa ngokukhangela. Emva koko, iya kuba yandile kwaye ihlambuluke, njengepereji yamanzi. Umzimba wakho kwi-SPA-salon unokunikela nge-honey, iziqhamo kunye neYavanese Lulur (ingumxube wefronta, i-almond kunye ne-rice powder).
Kungekudala, imilenze yakho iphela kakhulu? Yiya kwigumbi lokuhamba ngeenyawo uze wenze ibhedi ecocekileyo . Ngokomzekelo, kunye nekhredithi yehashe, i-arnica okanye i-cinnamon. Iipotomoni kunye neentsundu, kunye ne-pedicure yobungcali-iinkcukacha ezicatshulwa kangcono kusengaphambili. Nangona kunjalo, kunye nokuphefumula, umphumo wayo, ukuba ubanjwe kwi-salon, uhlala ixesha elide.
Vumela u- SPA- manicure ngokubambisana nokusilalisa okuphucula ukujikeleza kwegazi. Kwaye uphinde wenze i-paraffinotherapy - ukufudumeza nokutshiza ngemizuzu eyi-15 nje. Ukuyila kweepikili akufanele kuvumelane kungekuphela kwengubo yomtshato, kodwa kunye nokubonakala konke komtshakazi. Kumyingubo womtshato imibala ye-varnish ikhethiweyo i-pastel, kunye ne-predominance ye-shades emhlophe kunye ne-pinki, ngokudibanisa isilivere okanye igolide. Ngokuqinisekileyo unako ukumboza izipikili ezinobumba obulula, kodwa umsebenzi wokuyila unokwandisa kakhulu imfesane yomdlalo womtshakazi. Yenza ibe yinto engaphezulu kwaye ingavamile.
Ukuba ulusu lukhulu kakhulu, umtshakazi kufuneka abonise enye inkqubo ye-SPA - ukucoca ubuso . Kodwa kungekhona ekhaya, kodwa kwi-SPA-salon, ubuncinane iintsuku ezingama-3-4 ngaphambi komtshato ozayo. Kufuneka kube lymph drainage. Iphucula ukujikeleza kwegazi, isantya iinkqubo ze-metabolic kwaye ikhuthaza ukuphuma kwe-lymph. Ukuzihlaziya kuya kukwandisa ithoni yesikhumba, buyisela i-blush uze uhlaziywe kwakhona. Iindlela ezigqithiseleyo zokuphepha imijikelezo phantsi kweso sivalo sokulala esempilweni. Kodwa nangona kungenakunceda, ngoko kwi-salon yobuhle ungayilawula iinkqubo ezikhethekileyo, kubandakanywa ukusila ukukhanya kunye nokunyanzelisa.
Umphumo obalulekileyo kakhulu uphakamise imaski . Bathuthukisa ubuso obushushu, bandise ithoni yesikhumba, banikeze ngokuphakamisa. Ngokomzekelo, unokwenza imaski kunye neeplasticizers ngokusekelwe kumhlophe. Qhagamshelana ne-beautician kwi-canopy, kwaye uya kuthatha kuwe izixhobo ezihambelana nolunye uhlobo lwekhumba. Izilwanyana ze-hazel ziza kuba luncedo kwesikhumba seoli. I-cuperose yokubandezeleka (ukuphulwa komjikelezo wegazi) iya kunceda imaski ephuculwe kunye ne-bilberry extract.
Ukuba akukho xesha elaneleyo elunxwemeni lolwandle, ke kungcono ukusebenzisa i- solarium . Ukuba ulusu lufumene i-hue epholile kunye negolide, khetha izicwangciso ezilungiselelwe abantu abaluhlaza. Basebenzisa imisebe emnene kwaye ngoko umthunzi wesikhumba uya kuba wendalo.
Iindlela zokupheka zasekhaya zeenkqubo ze- SPA .
Ukuba ixesha okanye imali ukutyelela i-SPA-salon ayikho nto, akukho mntu makangacasuli. Iindlela zokupheka zasekhaya zeenkqubo ze-SPA ziya kunceda umtshakazi akhangeleke.
Ubuso: Ubuso besikhumba buya kubonakala butsha ngenxa yemaski. Thatha 2 tbsp. i-spoon ye-cottage cheese, engeza i-1 teaspoon yobusi, i-yolk 1, 1 ithispoon ye-aple cider viniga. Hlanganisa yonke into kwaye usebenzise ukujongana. Bamba imizuzu eyi-10-15, susela ngamanzi afudumeleyo. Emva koko, sebenzisa umququzeleli ebusweni bakho.
Kwizandla: I- Mask yezandla kuya kunceda ukuphelisa ukoma. Thatha 3 tbsp. l. ioli yeoli, 1 tsp. Ientyantyambo ezomileyo ze-chemist's daisy. Blossom chamomile iintyatyambo, uthele ioli yeoli, ukumboza kunye nendawo endaweni epholileyo kuyo yonke intsuku ezintathu. Isisindo esifumene sibeka izandla ezitshintshileyo. Gcina imaski imizuzu emi-5 ukuya kwimizuzu, uze uhlanza amanzi aphelileyo abilayo.
Imilomo: Ukuze wenze iminwe yakho ithambile kwaye ikhohlise, yenze i-lubricate nge-creams ekhethekileyo equkethe i-vitamin E. Unokwenza i-balm, leyo ithatha i-15 g ye-arix, i-100 g ye-almond e-sweet almond, i-1 teaspoon yejojoba yeoli, ubukhulu beetapuni ezimbini ioli. Emva koko kufuneka ubeke ijojoba ioli, ioli ye-almond kunye ne-wax kwi-glassware. Hlanganisa umxube obangelwayo kwi-oven microwave. Gcoba i-spoon. Kopa uze udibanise ioli. Umxube kufuneka ugcinwe kwintsimbi yeglasi.
Ngesikhumba ejikeleze amehlo: Ukubambisana kunye neengcingo zamehlo ezithobileyo, sebenzisa rhoqo iindlela ezikhethekileyo zokunyamekela indawo ejikeleze amehlo. Ziyasetyenziswa kakuhle ekuseni, kungekuhlwa, ukuphepha i-edema engadingekile phantsi kwamehlo. Ukuqhathaniswa kweenkcenkcesiso kuyisisombululo esisebenzayo. Faka ii-4-5 maxesha kwiinkophelo zemizuzwana emibini ehlanjululwe kwiidiski ezishushu ezinamanzi nezitshisayo. Okukugqibela kufuneka kubanda.
Ngombulelo wokuhlaziywa kweenkqubo ze-SPA, ukuxilisa amabini kuba yinto ekhangayo kunye neyokuzonwabisa.
Iimfihlelo zesisu esisisigxina
Indlela yokuhlamba amathoyizi athambileyo
Isidlo sikaRene Zellweger
Ubugcisa bokusebenzisa igrume: indlela yokusebenzisa iziqhumiso
Ukunyangwa kwengxaki yokuvalelwa kwabantwana
Indlela yokucoca ubuso
Iipropati zokuphilisa zesanti
I-horoscope echanekileyo kwiveki kaDisemba 11-17, 2017
Kutheni ndikwazi ukugcina i-monster ekhaya?
Indlela yokuchitha ixesha elifanelekileyo kwiholide
Yimiphi imifanekiso ifakwe ekhitshini?
I-Congress yama-clones: UDaria Pynzar ubonise iifoto zeentombi ezifanayo